Oge nke ojuju na Bitcoin, oge itinye ego? | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Gaton | | Ego
Mgbe nhụsịrị na ala niile sochiri ndụ nke cryptocurrencies n'akụkọ ihe mere eme ya, ndị na-achụ ego gị oge niile ga-abụrịrị ihe a na-ejikarị eme ihe n'ọnọdụ ndị a na-adịghị agbanwe agbanwe nke ọnụ ahịa ego elektrọnik na-agbanwe n'abalị.
Ma ọ bụkwa eziokwu na, maka ọtụtụ ndị ọzọ, omume a na-aga n'ihu bụrụ ụdị ihe kpatara na anaghị amalite ahia Bitcoin na onye na-ere ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ n'okpuru usoro ọ bụla ọzọ.
Ma ọ bụ mgbe ha mere ụdị nke ụdị a na ọnụahịa nke BTC na ihe mkpuchi ndị ọzọ, ọtụtụ anaghị akwụsị ịhụ nke a dịka otu ihe kpatara na agaghị etinye ha ego na ha. Mana ọ na-ewe obere nyocha banyere ndagide a na - adịbeghị anya - yana ụfọdụ n'ime ndị gara aga - iji tinye ụdị ihe omume ndị a na gburugburu ya. Ọzọkwa ịhụ na, ikekwe, ha nwere ike ọ bụghị naanị ihe nkịtị na ya mere na ọ dịghị onye kwesịrị ịla azụ, kamakwa ọ bụ ezigbo oge itinye ego.
Na-esote, anyị ga-enyocha ikpe a na-eburu n'uche, ee, na ọ nweghị oge dị ukwuu itinye ego na cryptocurrencies, mana naanị otu ụzọ isi mee ya: jiri nlezianya, ọtụtụ ọmụmụ ihe ma na-echebara ọtụtụ ihe egwu anya.
1 Oge kachasị anya
2 Ihe atụ gara aga
3 Ihe ngosi
Oge kachasị anya
Kemgbe mmalite nke iweghachite ọnụahịa nke BTC azụ na Mee 2019 A hụghị ya dị ala ka nke mkpụrụ ego Satoshi Nakamoto gosipụtara n'izu ndị ikpeazụ a. Dị ka a kọrọ site na ego ozi website mkpokọta, ọkwa nke $ 6.500 kwa otu nke Bitcoin gosipụtara na Disemba 16 bụ akara nkwado ọhụụ na ọbụna ụfọdụ ndị ọkachamara kwuru na ọnụahịa nwere ike ịda na $ 4.000.
Dabere na ndị ọkachamara edepụtara site na ntanetị n'ịntanetị nke usoro a, ọghọm dị na ọnụ ahịa nke isi cryptocurrency nwere ike ịbụ ihe kpatara ya mwakpo nke ndị isi China na ụdị aghụghọ ọ bụla metụtara cryptocurrencies, ọnụnọ mgbe nile nke izu ohi na hacks nke cryptocurrencies na enweghị ntụkwasị obi na ihe ndị a na-akpalite na ndị na-etinye ego buru ibu. Ma n'agbanyeghị nke a, ọ ga-ekwe omume iche na nke a agaghị abụ ọdịda ikpeazụ. N'ihi na, ikekwe, a ga-enwe mgbake. Dịka o meela ọtụtụ ugboro.
Ihe atụ gara aga
Ọnụ ọnụahịa Bitcoin ruo na December 2019
Akụkụ akụkọ ihe mere eme nke Bitcoin —Nke si n'aka ya nke ndi ozo nke cryptocurrencies - bu ugwu di elu na ndagwurugwu nke n'egosighi ihe obula ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ụdị akụ a. Enwere ike ịchọta nke mbụ n'ime ntụpọ ndị a n'oge mmalite nke Bitcoin, mgbe aha a apụtaghị na ọ dị ukwuu, n'oge ọkọchị nke afọ 2011. N'oge ahụ, BTC bịara jiri ihe karịrị $ 20 mee ihe n'otu nkeji mgbe ọ gwụsịrị obere karịa otu dollar ọnwa ole na ole gara aga. Agbanyeghị, tupu afọ nke afọ, cryptocurrency laghachiri azụ dollar abụọ.
Ọzọkwa, oge okpomọkụ na-esote akara akara mmalite nke elu. N'ime dollar isii na June 2012, Bitcoin ruru ihe dị ka 1.000 na November 2013 ... ruo mgbe ọ dabara n'etiti 2015 iji ruo 200 dollar.
Mana nke kacha mma ka ga-abịa. Na mbido 2017, otu otu BTC na-eri ihe ruru $ 1.000. Ná ngwụsị nke otu afọ ahụ, ọnụ ahịa ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20.000. Oge ara na BTC malitere. Otu afọ mgbe e mesịrị ọ dara n'okpuru 3.000. Ọkara otu afọ mgbe e mesịrị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 12.000. Na December 16, anọ m ọzọ na ndagwurugwu. Na ndagwurugwu nke puku isii na narị ise.
A hụrụ dị ka a hụrụ, ọ dịghị ndagwurugwu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu n'akụkọ ihe mere eme nke Bitcoin enweghị ike ịgbagha. Na ọnụahịa na-agbadata na elu na-atụghị anya ya ma ọdịghị onye, ​​ma-ọbụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọbụla, agaghị atụ anya ya. Yabụ, enwere ike ikwu na ndagwurugwu ọhụrụ a bụ oge ọjọọ itinye ego? Ọfọn, eziokwu bụ na ọ dịghị. Kedu ihe kpatara ọ nwere ike ịbụ, n'ihi na ọ dịghị onye maara ma ọ ga-aga n'ihu na-ada na njedebe.
Ma obu ikekwe, onye ma, ugbu a anyi no na ala di ala na ndagwurugwu. Ihe niile fọdụziri ugbu a bụ nkwalite ọhụụ. Anyị ga ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Ego » Oge nke ojuju na Bitcoin, oge itinye ego?
Ọkpụkpụ conduction ekweisi: AfterShokz Aeropex [Review]